Nokia 9.3 na 7.3 ga-amalite na nkeji nke atọ nke afọ a | Gam akporosis
HMD Global anaghị ezu ike na akaebe nke a bụ atụmatụ ya nwere ma tinye mwepụta nke ọhụụ ọhụrụ maka afọ a.
Abụọ n'ime ọdụ ndị a anyị ga-anata n'aka ụlọ ọrụ Finnish bụ: Nokia 9.3 na 7.3, arụ ọrụ mkpanaka dị elu na nke na-ajụ, n'otu n'otu, nke nweelarị ụbọchị ị ga-ebupụta.
Ọnụ ụzọ Onye Ọrụ Nokia Power O nyebeghị ụbọchị mmalite maka ekwentị abụọ ahụ, mana o kpughere na ụbọchị mwepụta a ga-ewepụta maka ekwentị abụọ a ga-eme n'ọdịnihu. oge obula na uzo ato nke 2020, oge nke gunyere n’agbata ọnwa July na September.
O doro anya, dị ka ihe ndị ahụ e kwuru na mbụ na-akọkwa, mobile ọzọ amaghi ga abia tinyere abuo aAgbanyeghị na amabeghị na a ga-ahapụ atọ ndị a ọnụ ma ọ bụ gosipụta arụmọrụ dị iche iche. Nke a bụ ihe anyị ga - achọpụta n'ihu ọha site na nkwupụta ma ọ bụ nkwupụta eziokwu nke na - ekwu banyere anyị ihe banyere ya.
Ihe ọzọ na-adọrọ mmasị bụ na Nokia 9.3 ga-abịa na mgbakwunye Pureview na njedebe, nke gosipụtara na ọ bụ nnukwu arụmọrụ ga-abịa na ya. Qualcomm Snapdragon 865 ma ọ bụ, ghara ime nke ahụ, na Ogbe 855. Ka anyị nwee olileanya na nke ikpeazụ abụghị nke a họọrọ; ọ bụrụ otu a, anyị na-ebu amụma ntakịrị ma ọ bụ na ọ nweghị ọganiihu ahịa.
Amabeghị ọtụtụ ihe gbasara ngwaọrụ a na Nokia 7.3, mana ụfọdụ akụkọ gara aga na-egosi na 7.3 ga-abụ ama dị n'etiti ama. adịchaghị nke a ga-enye na 4G na 5G mbipute. Nke a na - eduga na ya ịbụ Qualcomm Snapdragon 765G ikpo okwu mkpanaka ahọpụtara iji zụọ ma nye ya ike, agbanyeghị na nhọrọ ndị ọzọ dịka Mediatek Dimensity 1000, nke nwekwara ike ịkwado netwọkụ 5G, nwere ike ịnọ na tebụl.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nokia 9.3 na 7.3 ga-ahapụ na nkeji nke atọ nke afọ a
Ọnụ na nkọwa nke Huawei MatePad 10.4 mbadamba agbapụwo: Kirin 810 n'anya